Indawo yokuhlala yezomlando i-B & B - iPalermo
IB & B eyaziwa kabusha esezindlini zokuhlala zomlando zikanokusho, enkabeni yomlando wePalermo
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-12)
Indawo yokuhlala yezomlando i-B & B isakhiwo esiyingqophamlando esisenkabeni yomlando ye Palermo enikeza amakamelo okunethezeka kanye nezilungiselelo zikanokusho kubavakashi bayo.
Indawo Yomlando - Isakhiwo esinomlando esigxile kwezobuciko namasiko
B & B lokho kuzalwa ngaphakathi kwe- Indawo yokuhlala yomlando kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-900s. Indawo yayo emaphakathi enkabeni yomlando ye Palermo kwenza kube yindawo yokuqala yokuhambela izindawo ezikhangayo zedolobha kanye nezikhumbuzo zalo kalula. Indawo yokuhlala ibuye ivelele izindawo zokunethezeka ezinikeza izivakashi zayo, ngamagumbi amakhulu nahlomile, izinsizakalo zayo kanye nabasebenzi abanobungane nabasizayo ngaso sonke isikhathi.
I-B & B - Ukuphonswa kwetshe kusuka ezikhangisweni eziyinhloko zabavakashi
B & B, ngenxa yokuma kwayo okuhlelekile, itholakala ngokujikijela itshe emigwaqweni emikhulu yedolobha nakwezinye izindawo ezikhangayo eziheha izivakashi. Amamitha nje ukusuka eCentral Station, i- B & B kusondelene kakhulu nesaziwayo nesici UMercato Ballarò. Cishe ngamamitha ambalwa ukusuka lapho uzothola iSonto likaS. Maria dell'Ammiraglio - iLa Martorana, iSonto laseSan Cataldo neBandla laseSan Francesco d'Assisi. Uzothola nethuba elihle lokuhlala useduze kakhulu Isikwele sasePitoli noMthombo waso omkhulu wodumo we-Shame.
Amakamelo kanokusho anakho konke ukunethezeka
Amakamelo ahlongozwa ngu B & B banzi kakhulu futhi bayemukelwa, benosayizi ongamukela imibhede emithathu. Zonke ziqhakazile futhi zine-TV screen flat, ukufudumeza, ukufakwa komoya, i-minibar, indlu yangasese yangasese kanye ne-balcony ebheke umgwaqo omkhulu. Ihhotela libuye linikeze ithuba lokubhuka i-Suite, ebanga amamitha ayisikwele angama-80, ifakwe ama-TV wesikrini 2 ashubile, ukufudumeza, okokupholisa izindiza ezi-2, indlu yangasese yangasese ene-sink kabili, ama-minibar nama-2 balconies.
Indawo Yomlando - Ubuciko, isiko kanye nezinsizakalo eziningi
Il B & B Inikezela ngezinsizakalo eziningi ezivakashini zayo, njengeWiFi yamahhala namakamelo afaka i-TV-screen ikhebula elisendlini yangasese kanye negumbi lokugezela langasese elinama-bidet, izindlu zangasese ezihlanganayo nomgcini wezinwele. Lapho kukhona izivakashi, ngaphezu kwegumbi lokuphumula okwabiwe kulo, indawo yokupaka yamahhala kanye nethuba lokusebenzisa isivalo sezindiza. Konke kuhambisana nobungani obukhulu nosizo oluzokwenza ukuhlala kwakho kukhetheke.